के cryptocurrency लगानीकर्ताले बेच्न सल्लाह गर्दै, र जो एक राख्न? - Blockchain समाचार
सक्छ 29, 2018 व्यवस्थापक
मई को अन्त विनिमय मा एक उल्लेखनीय मंदी को तख्तापलट संग गुप्त उद्योग हैरान. मई को अन्तिम trimester मा, शीर्ष-25 cryptocurrency एक सजिलै देखिने गिरावट देखाए. त्यसैले, मई मा 22, तल Bitcoin गिर $ 8000 अप्रिल देखि पहिलो पटक 18. ईथर र Bitcoin नगद sank 14% एक हप्तामा, EOS – द्वारा 6%, र XRP – द्वारा 8.5%. हप्ता tron ​​थियो कि मात्र विजेता (TRX), जो आफ्नो उद्धरण अलिकति वृद्धि भएको रिपोर्ट.
मुख्य बजार मार्कर एक को प्रवृत्ति – Ethereum र Bitcoin को cryptocurrency जोडी को अनुपात – पनि तलतिर एक परिवर्तन. यस कारण, अन्य Altcoins, को Ethereum blockchain आधारित र, त्यसैले, आंशिक यसको स्थिति मा निर्भर, को Bitcoin दर अस्वीकार जारी यदि जोडले पर्न सक्छ. एउटै समयमा, सञ्चितिको cryptocurrencies बजार पूँजीकरण गर्न घट्यो $ 322.5 अरब, द्वारा sagging 14% मई को दोस्रो trimester तुलना.
के व्यापारीहरु बजार मा गर्नुपर्छ, जो मंदी को पंजे पंजे हुन बाहिर गरिएका? हालै, उद्यम लगानीकर्ताले पहिले नै राम्रो cryptocurrencies को मुद्दा मा कुशल छन् र पहिले नै कडा व्यापारीहरु सल्लाह छन् किन्न के, राख्न र के बेच्न के. जनवरी मा ठूलो फिएट लगानीकर्ताले बीचमा यो प्रवृत्ति छैन त स्पष्ट थियो हुनत.
Cryptocurrency लगानीकर्ताले सिफारिस
उदाहरणका लागि, स्पेन्सर Bogart, Blockchain पूंजी मा साझेदार, को आदानप्रदान मा हालको अवस्था सफल खरिदका लागि लाभदायक छ भन्ने विश्वास गर्छ. “पछि Bitcoin हालै अधिक र प्राय प्रयोग गरिएको छ र यसलाई अझै पनि धेरै संस्थागत चासो छ, यो लगानी लायक छ. सबै ठूलो बैंकहरू उहाँलाई काम गर्न प्रयास गर्दै, आफ्नो ग्राहकहरु प्रस्ताव. केही खुला व्यापार मञ्चहरूमा. Bitcoin एक गहिरो institutionalization साधारण सकारात्मक छ, “वक्ताले भने.
संसारको पहिलो cryptocurrency को घटते गतिशीलता बावजुद, Bogart आफ्नो भविष्य बारे धेरै तेजी को छ. “Bitcoin सक्नुहुन्छ सस्ता हुन? पक्कै पनि. तर म एक वर्ष आफ्नो पाठ्यक्रम उच्च हुनेछ लाग्छ? बिल्कुल निश्चित, “- उहाँले एक व्याख्या CNBC लागि साक्षात्कार.
सकारात्मक पूर्वानुमान, तथापि, altcoins लागू छैन. “धेरै cryptocurrencies overvalued र अविश्वसनीय छन्. तिनीहरूले हुनेछ मौका छ “गोली”, तर तिनीहरूले यो लागि धेरै अवरोधहरू छन्, “Bogart भने.
अर्को उद्यम निवेशक Cardano नियालेर लिइरहेको सुझाव (एडीए), tron (TRX), आईओटा (भएदेखि) र नव (नव).
चाखलाग्दो कुरा, को Ethereum स्पेन्सर Bogart लागि रूपमा बरु होसियार हुन्छ. “यो कुरा हो, त्यहाँ धेरै छ IČO को Ethereum blockchain मा. यी परियोजनाहरू के हुनेछ र यो airing Ethereum पाठ्यक्रम असर कसरी ज्ञात छैन,” उहाँले टिप्पणी. “अर्कोतर्फ, म लहर जस्तै ठूलो खेलाडीहरू को पर्स मा पकड थियो, Bitcoin नगद र EOS।”
अन्य गुप्त उत्साही पनि बरु होसियार पूर्वानुमान व्यक्त. “एक मंदी को प्रवृत्ति मा के गर्न, जो, मध्यम अवधि मा, केहि पुष्टि छैन? यो निश्चित छैन लायक speculative क्रममा cryptocurrency खरीद छ. तपाईं छ महिना वा एक वर्षको लागि केही लिन जाँदैछन्, त्यसपछि केहि लिने छैन. तपाईं पहिले नै दीर्घकालीन पोर्टफोलियो रणनीति बसेर छन् भने, त्यसपछि होल्ड, किनभने एक अल्पकालीन प्रवृत्ति मा यो बाहिर हाम फाल्न र थप अनुकूल मूल्य फेरि हाम फाल्न गर्न सम्भव हुनेछ कि अस्पष्ट छ. तपाईं एक पेशेवर व्यापारी छन् भने बिक्री मात्र अर्थमा बनाउँछ. तर पनि तिनीहरूले व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, वास्तबमा, मात्र प्राविधिक रिबाउन्डस् मा, त्यसैले कुनै पनि मामला मा आफ्नो सम्पत्ति राख्न राम्रो छ. सामन्यतया, मेरो सिफारिस कम पूँजीकरण संग altcoins ध्यान छ, किनभने बजार अहिले बसोबास छ, र Bitcoin पछि altcoins पटक थप मा डूब छन्.
बजार मा एक मंदी को अवस्थामा के गर्न, प्रत्येक व्यापारी आफूलाई लागि निर्णय. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सही तपाईंको cryptocurrency पोर्टफोलियो गठन गर्ने र यदि त्यहाँ बजार मा उतार चढाव छन् आतंक छ. विशेष गरी यस्तो अस्थिर cryptocurrency रूपमा.
स्टक कप - खरिद र बिक्री को पर्खालहरु
के छ "पर्खाल" च ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 29.05.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 30.05.2018